राष्ट्रपतिलाई नै कोरोना संक्रमण भएको खुलासा, सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी — Sanchar Kendra
वार्सा । पोल्यान्डका राष्ट्रपति आन्द्रे डुडालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको रहस्य खुलेकाे छ । पोल्यान्डको राष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी मन्त्री ब्लाजेज पिचाल्सकीले शनिबार राष्ट्रपति डुडालाई कोरोना देखिएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिलाई हिजो गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ ।,’ मन्त्री पिचाल्सकीले ट्विटरमा लेखेका छन् । पोल्यान्डमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेकै बेला राष्ट्रपति डुडामा पनि संक्रमण देखिएको हो ।
कोरोना भाइरसः के हो कोभिड-१९? यसका लक्षण के हुन्? यसबाट मृत्यु हुने सम्भावना कति छ? कसरी सुरक्षित हुने?
कोरोनाभाइरस महामारीले हाम्रो जीवन र सम्बन्धमा अकस्मात् धेरै परिवर्तन ल्याइदिएको छ। अहिले विश्वभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने रोग कोभिड-१९ को त्रास छ। विश्वका अधिकांश देशमा मान्छेका गतिविधिहरू अत्यावश्यक काममा मात्रै सीमित भएका छन्।
ज्वरो आउनु र सुक्खा खोकी लाग्नु कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि लाग्ने रोग कोभिड-१९ का मुख्य लक्षण हुन्। केही बिरामीमा घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने र पखाला लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ। केही बिरामीमा घ्राणशक्ति अर्थात् सुँघ्ने क्षमता पनि शिथिल भएको पाइएको छ।
केही मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भए पनि कुनै गम्भीर लक्षण देखिँदैन। तर उनीहरूले थाहै नपाई अरूलाई भाइरस सारिदिन सक्छन्। यी लक्षण देखियो भने घरमै अरूबाट अलग्ग बस्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाव दिएको छ। झन्डै ८० प्रतिशत मानिसमा सामान्य खालको सङ्क्रमण हुन्छ।
तर ज्वरो आएको छ, खोकी लागेको छ र सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ। किनभने ती लक्षणले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा भएको सङ्क्रमण वा अन्य गम्भीर समस्यातिर सङ्केत गर्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीब्र गतिमा विश्वभर फैलिरहेको छ । यसबाट विश्वका १६७ मुलुक र भूभागहरु प्रभावित भइसकेका छन् ।
कोरोना भाइरसबाट हालसम्म विश्वमा १ लाख ९८ हजार १ सय ९३ जना संक्रमित भइसकेका छन् भने हालसम्म ७ हजार ९ सय ५४ जनाको मृत्यु भइसकेको जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । ८२ हजार ७ सय ८१ जना कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
कोरोना भाइरस मानव वस्ती नै नभएको अन्टार्टिका महादेशबाहेक सबै महादेशमा पुगिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोपलाई कोरोना भाइरसको केन्द्रविन्दू मानेको छ । कोरोनाबाट हालसम्म सबैभन्दा धेरै चीनमा असर परेको छ । यद्यपि चीनमा भने यसबाट निको हुनेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ भने संक्रमितहरु पनि दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेका छन् ।
चीनमा हालसम्म ८१ हजार १ सय १ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकोमा ३ हजार २ सय ४१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यद्यपि पछिल्लो २४ घण्टामा चीनमा केबल १ जना मात्र नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । अर्कोतर्फ युरापेली मुलुकमा भने दैनिक संक्रमित एवं मृतकको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
यसबाट चीनबाहिर सबैभन्दा धेरै इटाली प्रभावित छ । केही मुलुकहरु छन्, जहाँ कोरोना भाइरस पुगेको छैन वा त्यहाँ कसैमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुगेको पुष्टि भएको छैन । कोरोना भाइरस नपुगेका मुलुकको संख्या ५० छ ।
त्यस्ता केही मुलुकहरु छन्, जहाँ कोरोना भाइरस पुगेको छैन वा त्यहाँ कसैमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुगेको पुष्टि भएको छैन । कोरोना भाइरस नपुगेका मुलुकको संख्या ५० छ । कोरोना भाइरसको उद्गम एसियाका अधिकांश मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि त्यस्ता केही मुलुक छन्, जहाँ अहिलेसम्म कोरोना देखिएको छैन ।
एसियामा पर्ने त्यस्ता भाग्यमानी मुलुकहरु चाहीँ उत्तर कोरिया, यमन, तुर्कमेनिस्तान, सिरिया, पूर्वी टिमोर, लाओस, ताजिकिस्तान, म्यानमार हुन् । युद्धग्रस्त सिरिया र यमन अनी अधिनायकवादी तानाशाही शासन व्यवस्था रहेका तुर्कमेनिस्तान र ताजिकिस्तान कोरोना भाइरस देखिएको छैन ।
अत्यन्त गोप्य समाज मानिने म्यान्मार त्यस्तै, कम्युनिष्ट मुलुकहरु लाओस र उत्तर कोरियामा कोरोना भाइरसको संक्रमित पुष्टि भएपनि बाहिर नआएको हुनसक्ने आशंका गर्ने धेरै ठाउँहरु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरु बताउँछन् ।
एसियाका उत्तर कोरिया, यमन, तुर्कमेनिस्तान, सिरिया, पूर्वी टिमोर, लाओस, ताजिकिस्तान, म्यानमार त्यस्तै अफ्रिकाकाे बोत्सवाना, बुरुण्डी, केप भर्दे, चाड, कोमोरोस, जिबौटी, इरेट्रिया, गिनी बिसाउ, लेसोथो, लिबिया, मदागस्कर, मलावी, माली, मौरिसस, मोजाम्बिक, साओ टोमे एण्ड प्रिन्सिपे, सिएरा लियोन, निजेर, जाम्बिया, युगान्डा र जिम्बाब्वे रहेका छन् ।
अष्ट्रेलिया र प्रशान्त क्षेत्रका फिजी, किरिबाटी, मार्शल टापु, संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया, नउरु, पलाउ, पपुवा न्यूगिनी, सामोआ, अमेरिकन सामोआ, न्यू कलेडोनिया, सोलोमोन टापु, टोङ्गा, टुभालू र भानुआतु रहेका छन् । उत्तर अमेररिकाका निकारागुवा, हैटी, ग्रेनाडा, डोमिनिका, एल साल्भाडोर, बर्मुडा र बेलिज रहेका छन् ।